Emincane Okwamanje ejabulela ithandwa enkulu eRussia futhi efakwe ezindlini kwabaningi abantu bakithi. Khweza nemishini yesimanje, njengoba kubiza ayibizi, ngezinye izikhathi ngisho Cottages. Ngokuvamile, le ndlela akhethiwe kunjalo, uma befuna ukuze wonge isikhala egumbini lokugezela.
Izinhlobonhlobo eyinhloko izihlambi
Shintshashintsha imishini sanitary yalolu hlobo ingase ibe ngezizathu ezahlukene. Lokhu kungaba izici ezifana:
Izinto asetshenziswe ekukhiqizeni;
imishini degree kanye t. d.
Usayizi iyiphi ebiyelwe eshaweni kunqunywa endaweni Pallet. Kuze kube manje, abakhiqizi babe onobuhle kokubili ne izinhlangothi high and low. I sokugcina ziyimifanekiso ethandwa kakhulu. Kulokhu, omunye onobuhle ezithandwa kakhulu endlwaneni eyakhiwe 120x80 eshaweni nge ugqoko ongaphakeme.
Izinzuzo onobuhle usayizi 120 x 80 cm
Cabs akhethiwe ngokuyinhloko esekelwe indawo egumbini ngazo ukuthi ifakwe. Ngakho, endlini yangasese ezincane Khrushchev ngokuvamile ukukhwezwa iphethini encane kakhulu nge izilinganiso 80 x 80 noma 90 x 90 cm. Indlu yangasese ivulekile Cottages ezweni elifanayo ngokuvamile kubonakala nge gumbi odongeni obuphelele obujwayelekile egcwele 170 cm noma ngaphezulu.
Sinesithakazelo imodeli kukhona, Ngakho-ke, ukuze imishini yobukhulu isilinganiso. 120x80 eshaweni gumbi nge ugqoko ongaphakeme, ngokungafani ezincane, kungenzeka ukuthi kakade ifakwe zonke izinhlobo amadivaysi ezengeziwe. Kulokhu, ngaphakathi kuyodingeka isikhala esanele ukhululekile ukuthatha amanzi ukwelashwa.
Izici lakhetsiwe ukuphakama odongeni
Ukufaka ezifana imodeli unxande kungenzeka ngendlela evamile (odongeni) futhi ekhoneni. Kulo mBhalo, it okusindisayo isikhala egumbini. Ngenxa yohlobo yanoma iyiphi nezinye usayizi, eshaweni 120x80 ugqoko ongaphakeme (unxande) Kungase kudingeke eziphakeme ezahlukene. Esikhathini sethu, ukuthi likhiqizwa sanitary imishini ukuphakama kusuka 170 cm 240 cm. Abanikazi ezindlini idolobha, ukuphakama ophahleni okujwayeleke 250 cm, ngakho bangakhetha ngokuphelele iyiphi imodeli. Esikhathini yokugezela ukungena kalula ngisho inketho phezu 240 cm. Nokho, eshaweni ongaphakeme egumbini lokugezela we Khrushchev efanayo uyobheka cishe, ivumelane ngaphezulu. Indlu yangasese has a ivulekile izwe cottage Yiqiniso, ukusungula imodeli ephakeme.
Ngebuhle nebubi wamadokodo nge ugqoko ongaphakeme
Izinzuzo lolu hlobo imishini kwasekuqaleni zihlanganisa:
Lula ukusetshenziswa. Ukuze angene leli tafula kulula. Ngakho-ke, kungaba nje Lifanele ukuthi efulethini, izingane, asebekhulile noma abakhubazekile ekhaya.
Ukubukeka okuphawulekayo. Cabs yalolu hlobo bheka zanamuhla futhi stylish ukwedlula onobuhle Pallet okusezingeni eliphezulu. Ngaphezu kwalokho, izakhiwo ezifana gubadlela isikhala kancane.
Ukuntuleka kokukhulumisana imishini yalolu hlobo, kukhona eyodwa kuphela, kodwa kubalulekile. Egibele eshaweni ugqoko ongaphakeme e niche ekhethekile phansi. Ngakho amapayipi ipayipi ubabonisa ophahleni. Konke lokhu kube inkimbinkimbi kakhulu izindleko zokulungisa amapayipi esikhathini esizayo. Amamodeli nge amabhampa okusezingeni eliphezulu ogibele luhlaka ekhethekile metal. Ngakho-ke, izinkinga ababa nazo enkonzweni yabo ngokuvamile asivelanga.
Yini kungaba design
Lapho ekhetha imishini efana izihlambi 120x80 cm nge ugqoko ongaphakeme, phakathi kwezinye izinto, kufanele, yebo, banake kakhulu ngokubukeka kwabo. Umklamo onjalo ware sanitary zingenziwa ngendlela yesimanje isitayela, classical, Minimalism, nokunye. D. Yiqiniso, lapho ukhetha lolutsite kufanele bacabangele izinto ezifana umklamo othize uqobo yokugezela. Minimalism kungenzeka efanelekayo esengeziwe endaweni encane yokugezela. IZindaba Zasendulo ukukhetha Cottages abanikazi.
gumbi ezisezindongeni zingase zibe izinto opaque noma obala. Ngo inhlanganisela yokugezela Khrushchev Yiqiniso, kungcono ufake inguqulo yokuqala imishini. 120x80 cm eshaweni ezihlukanisa amahhovisi enezindonga esobala ubukeka bahlaba umxhwele nakakhulu, Nokho, kuyinto efanele kuphela ekamelweni elihlukile esiqokiwe ngqo ukwamukelwa yamanzi ukwelashwa.
Yiqiniso, i-choice imishini sanitary qiniseka ukuba banake umbala waso. Brown, onobuhle omnyama esiliva Ungabheka iyamangalisa ngempela. Nokho, kukho ezithandwa kakhulu zonke okufanayo eshaweni gumbi 120x80 (ongaphakeme eshaweni ugqoko) ezimhlophe.
Yini zingenziwa Pallets
Lo msuka ukuklama ngigeza uma hhayi ngokulambisa abalulekile. Acrylic - lapha ngalokho ngokuvamile enziwa eshaweni emathileyi 120x80. Shower ugqoko 120x80 cm, yazalwa izinto ezinjalo kulula ukuze anakekele futhi maintainability ezinhle. Futhi le ngxenye gumbi zingenziwa ngensimbi noma insimbi inkatho. Inzuzo enkulu ukhetho lokuqala eziphansi. Sakaza yensimbi okuzikhulula exhunywe ukuzinza cab kanye nokusebenza ethule zihlukile.
onobuhle Popular nokubuyekeza ngazo
Yiqiniso, lapho ekhetha eshaweni, phakathi kwezinye izinto, sinake umakhi. The best onobuhle kude ezibhekwa ezenziwe eJalimane. Kuhle kakhulu, ngokwesibonelo, abathengi uphendule hardware Wasserfalle. Emincane nge Pallet ongaphakeme noma yilobu brand kungenziwa ngaphezu kwalokho ifakwe izihlalo, ukukhanyisa enhle nokunye. D. abaningi baye baphawula yokuthi imishini ukuthi umenzi ngokuvamile has yokuqala, mklamo ongavamile.
umbono Okuhle kusuka kubathengi yasekhaya futhi uye waklama plumber, ekhiqizwa eFinland. Brand ethandwa kakhulu 120x80 cm kumakhabheni ekhiqizwa kuleli zwe kukhona Timo futhi Ideal Standard. Umenzi lokuqala, nahlulele by ukubuyekezwa abathengi, silwenza-asebenziseka kalula, hhayi eqolo futhi ngesikhathi esifanayo imishini multi-functional. 120x80 eshaweni gumbi nge ugqoko ongaphakeme Ideal Standard hola udumo ngokuyinhloko kalula ukusetshenziswa kanye nomklamo stylish.
Kungani-ke abandayo ngakho lapho sithola aphume eshaweni?
Uchungechunge oluthi "Saw .: Ukubuyela Ekhaya": abadlali nezindima